Loolankii ugu adkaa oo dhexmaraya Beelaha Habargidir & Mudulood, Finish iyo Qoor-Qoor.
July 29, 2020 NEWS 5
MUQDISHO(P-TIMES) – Loolanka ugu adag ee loogu jiro qabashada xilka Raysalwasaare-nimada ayaa socda, una dhaxeeya beelaha Habargidir & Mudulood, mid kastaana ay doonayso qabashada xilkaan, waxaana dhacay kulamadii ugu adkaa oo ay dhinacyadu is dhaafsanayaan.
Kulan gaar ah ayay yeesheen Madaxweynaha Galmudug, M/weynihii hore G/Mudug & Gudoomiyaha Beesha Habargidir, kaas oo ay uga hadleen doonistooda kursigan.
Gudoomiyaha gobalka Banaadir ahna Duqa Muqdisho ayaa dhankiisa martaliyey kulan ay yeesheen xildhibaano, wasiiro katirsanaa Xukuumaddii dhacday & Odayaasha Mudulood oo ay ku shaaciyeen in ay kursiga R/wasaare-nimo u doonayaan Cabduqaadir Cosoble Cali oo kamid ah baarlamaanka Faderaalka, kana tirsan madasha mucaaradka.
Hardanka loogu jiro qabashada xilkan ayaa socda oo maraya halkii ugu xasaasinaa waxayna beelaha Hawiye ku tartamayaan cida qabanaysa xilkan oo maalmo kahor laga qaaday Xassan Cali Kheyre oo kasoo jeeda Beesha Murursade oo ahayd markii koowaad ee ay jagadan qabtaan.
Waa nacasnimo, cidda isu haysata in banaadir uun leeyahay Wasiirka koowaad, la idi arag, madaxdiini la arag. inaka daaya in la la soo boodo cidaanaa iska leh, Mudug hala eego markooda. koleyba dhowrkaan bilood oo haray, ninkii ku guuleysta kursigaas, hawl aad u bilaaran ayaa u taal. nin ka bixi karaa wuu yar yahay ama majiro. bal aan aragno. ninkii xilkaas dhabarka saari lahaa.
In aay Soomaaliya iyo dadkeedaba sii jiraan haddii la doonayo, waa in Abgaal laga ilaaliyo labada kursi ee Dalka ugu Sarreeysa!!!
Ali Geedi lacagtii aay Arab ugu deeqday dalka ayuu dhacay oo uu Gurigii John Grand ku iibsaday.
Nuur Cadde oo 80 jir ah, safaaradii Talyaaniga ayuu 30 sano kireystay.
Shariif Baddii buu Kenya ka iibsaday!!
Culusoow Gabdhihii Abgaal iyo Raxanweyn ee aay da’doodu u dhexeeyay, 15-20 ayuu Carab u hammuun qabto ka iibsaday!
Intaas oo astaamood oo wada xun ma jiro, Qabiil Soomaaliyeed oo kale oo kulansan karo!
Dadku waxaay isku qaldayaan, Aadan Cadde iyo Abgaal!
Aadan Cadde wuxuu ahaa, Mudullood oo aay dhalasho kore wadaagaan, ee muusan ahayn Abgaal.
Xilka sare ha la siiyo, Habargidir/Sacad oo ah, Maskaxda Hawiye!!
Hawiye waa inay wax isku falaan oo aysan ukala ordin condem ka cusub ee Farmaajo rabo inuu isticmaalo lixda bilood ee u harsan.
Kkkk, habargidir soo ma’aha kuwii wadan dhisan maalin cad burburiyey fiiqdeen jingadihii wasaaradaha dhaceyn caruur agoon ah….
War wuxu isma dhamaaan waa dameer iyo labadiisa dhagood badii gate safaarado kirayste gabdho iibsade jiingado fuqsade marka maxaynu iskugu daalinaynaa ismaba dhaamaane hhh